Ma jirto habka siriyeyaasha degdegga ah ee sirta ah ee lagu iibiyo on Amazon for 7,64 oo kaliya $ - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » heshiisyo Ma jirto qaab u fududeeyaha siriyeyaasha degdegga ah ee iibka on Amazon ee kaliya 7,64 $ - BGR
Ma garanayno sida qiimaha kuugu saldhigay farsamoyaqaannada si fiican loo casriyeeyay dhawaanahan, hase yeeshee waa wax isbedel ah oo aan ku guuleysan karno. All agagaarka $ 15 waa qiimo aad u wanaagsan, waayo, xeedho wireless taageera 7,5W lacag deg deg ah loogu talagalay iPhone iyo 10W ee telefoonada Android, laakiin maanta waxaa jira sale a on Amazon oo bixiya model fiican qiyaastii kala bar. Bixiyaha Taariikhda 10W Wireless Wireless waxaa loo yareeyay 8,49 $ US on Amazon maanta, laakiin waxaad sidoo kale gelin kartaa coupon ah 10% bogga wax soo saarka. Tani waxay hoos u dhigtaa qiimaha $ 7,64, taas oo gabi ahaanba aan la aqoon. Ma garanayno inta uu hoos u dhacayo qiimaha iyo kujada 10% waxaa laga yaabaa in la heli karo kaliya xaddad xadidan. Si kalmadda kale ... dhaqso!
【Saxan brand HORE wireless WORLD Sida hoggaamiyaha warshadaha saxan wireless Seneo diiradda saarayaa hal-abuurka ee design iyo technology in ay bixiyaan lacag ugu fiican ee waayo-aragnimo in ay macaamiisha adduunka oo dhan. Seneo more iibin badan saxan wireless 2 000 000 oo uu had iyo jeer lagu go'an in ay bixiso saddex sano damaanad ah in macaamiisha ay saaxiibtinimo
NO xeedho DEGDEG AH IYO silig 7,5W 10W, jaanqaadaan telefoonada taageera xukun degdeg ah ama technology Qi. The xawaaraha si dhakhso ah Upload wireless ah 7,5 W waa xawaaraha Upload wireless ah iPhone Xs / Xs Max / Janumet / X / 8 / 8 More iyo 10W for Samsung Galaxy S10 / S9 / S9 / S9 / S8 ah + / Note9 / 8 / S7 / S7 / S7 Edge / Edge + S6 / Note5, 5W google Pixel 3 / 3XL, LG V30 oo dhan telefoonnada gacanta la technology Qamaan
Loading oolnimada sare IYO BADAN ILAALINTA Qamaan certified oo ansixiyay la ATB technology lahaansho (dheelitirka heerkulka si toos ah), xawaaraha xukun wireless waa ilaa 15% ka dhaqso badan kuwa kale, Iyada oo la ilaaliyo heerkulka, difaaca tamarta ee korontada, difaaca tamarta, ilaalinta gaaban iyo badbaadin kale oo dhowr ah. Taleefanka gacanta waa in laga saaraa walax kasta oo dheeraadka ah si looga hortago in telefoonka uusan ka weyneyn.
【SLEEP ADAPTATION Tusmiga LED caqli-tus ah oo muujinaya xaaladda kharashka amniga. Iftiinka cagaaran wuxuu leeyahay iftiin dhexdhexaad ah markuu kugu amro, sidaa daraadeed si fudud ayaad u heli kartaa telefoonkaaga mugdiga oo aan fara galineynin hurdadaada.
WARBIXINTA IYO GARGAARKA Package waxaa ku jira 1 x Wireless charger, 1 3,3 'micro USB cable, 1 x User Manner. Ku qanacsanaantaada waa yoolka ugu horeeya. Taleefoon kasta oo siman oo dhan waxaa ka mid ah lacag celin maalmaha 45 iyo damaanad ah 3 ANS (ma laha adapter-ka AC)
Raac @BGRDeals on Twitter si aad uhesho taariikhda ugu dambeysa iyo kuwa ugu casriyeysan ee aan ka heli karno webka. Si aad u ogaato wax badan oo kusaabsan dalabkayaga dalbaday iyo fursadaha daabacan ee maalgalinta, fadlan u soo dir email sponsorisé@bgr.com
. Waxyaabaha ay ka kooban tahay BGR Deals waxay ka madaxbannaan tahay tifaftirka iyo xayeeysiinta, BGR waxay heli kartaa guddi iibsasho ah oo lagu sameeyo daabacaadeena. .